3hp tokan-tena tokan-tena amidy, 3 hp herinaratra 3450 rpm dingana tokana
Motera herinaratra 3hp 3450 rpm tokan-tena tokan-tena amidy
3 hp motera herinaratra amin'ny vidiny tsara
3 hp amin'ny herinaratra amin'ny vidiny tsara avy any Chine sy India.
3 hp motera elektrika dingana tokana mifono Fan-Cooled tanteraka
Motera elektrika 3 hp 3450 rpm dingana tokana natao manokana ho an'ny fanamboarana hazo
Adiresy fiompiana motera elektrika 3 hp ampiasaina amin'ny fampiharana fambolena isan-karazany.
Môtô elektrika 3 hp 1725 rpm dingana tokana, Auto Thermal Protection, 115 Volt, 60 Hz
Momba ny motera herinaratra 3 hp
Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index. Ary koa, motera elektrika 3 hp 3450 rpm dingana tokana dia natao hampiasaina amin'ny fitaovana milina, paompy, compresseur, conveyor, mpankafy ary tanjona ankapobeny hafa. Izahay eto dia hanohana ny fanamboarana vy sy fikolokoloana rehetra rehefa nividy anay taminay. Ny dingana 7.5 hp an'ny motera elektrika rehetra dia vaovao sy tsy ampiasaina na tanana faharoa.
Ny adidin'ny motera elektrika 3 hp dia misy amin'ny endriny 3, fanombohana capacitor na famolavolana motera kapila maharitra. ny dingana 1 - 1740 RPM - TEFC - Tendrombohitra henjana - 180 Frame - Tantsaha adidy tantsaha 3 hp vidin'ny motera herinaratra namboarina ho an'ny indostrian'ny fambolena henjana. Izy ireo dia tsara kalitao toy ny leeson 3hp singa tokana.
Fiantombohana maotera elektrika 3 hp amina karazana amp misy vidiny lehibe. Fiarovana be loatra amin'ny tanana sy fananganana baoritra baolina ho an'ny fiarovana sy ny faharetana. Ho an'ny motera elektrika 2 hp 1725 rpm dingana tokana ihany koa. Misy YL dingana tokana 20 hp 20 kw ac kely herinaratra, trano aluminium, raha manana vahaolana horsepower lehibe ianao dia takiana. Mividiana motera dingana tokana amin'ny vidiny tsara indrindra any India na any Sina ary ny fivarotana anay dia ho an'ny karazana motera fampidirana dingana tokana sy motera fampidirana herinaratra.
Môtô 3 hp 1440 rpm, dia tsara ho an'ny karazana fampihenana hafainganam-pandeha na fihenan'ny fitaovana. izay mampiasa kodiarana kankana amin'ny tendrony mihena. Mandrakotra feno amin'izao fotoana izao ao amperes dingana tokana mifandimby ankehitriny maotera herinaratra 2 hp 1725 rpm dingana tokana.
Models Power (KW) Amps Speed EF. Fctorer Torque Torque Amps
Azafady mba hifandraisa aminay raha manana fanontaniana ianao momba ny tarika ataontsika.